သြစတြေးလျလူမျိုးများအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပုံကိုသိခြင်း Absolut ခရီးသွား
Isabel | 16/04/2021 11:15 | အဆင့်မြှင့်တင် 16/04/2021 12:15 | ၾသစေတးလ်
အကယ်၍ သင်၏နောက်အားလပ်ရက်တွင်သင်သည်သြစတြေးလျသို့သွားလိုလျှင် (သို့) ဤတိုင်းပြည်တွင်ပညာသင်ကြားလိုပါကဘဝနှင့်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်သင်သိသင့်သည့်အချက်များမှာ၎င်း၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်နေ့စဉ်အလေ့အထများဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်အသစ်တွင်နေထိုင်ကြသောလူအချို့အတွက်အထူးသဖြင့်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုထိတ်လန့်စရာဖြစ်စေနိုင်သည်။ သြစတြေးလျကဲ့သို့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ရေထဲရှိငါးများကဲ့သို့ခံစားရရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒေသခံများနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်စေ၊ လမ်းညွှန်မှုတောင်းခံရန်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုခုမေးမြန်းရန်သူတို့ကိုသင်နှုတ်ဆက်ပြီးသင့်လျော်စွာမိတ်ဆက်ပေးရလိမ့်မည်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာသြစတြေးလျလူမျိုးတွေအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပုံကိုလေ့လာသွားမှာပါ။
Aussies ဟုလည်းလူသိများသောAustrစတြေးလျလူမျိုးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏ရင်းနှီးမှု၊ ရင်းနှီးမှု၊ ရိုးသားမှု၊ သူတို့သည်များပြားလှသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ဘ ၀ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပညာရေးအဆင့်အတန်းများသို့ဘာသာပြန်ဆိုသောကောင်းမွန်သောပညာရေးအဆင့်ကိုရရှိကြသည်။ အဆုံးစွန်သည်သူတို့၏ဖော်ရွေ၊ ပွင့်လင်းမှု၊
သြစတြေးလျလူမျိုးများသည်ရိုးရှင်းသောလူတန်းစားများဖြစ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသော၊ လူမှုရေးအတန်းများခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ။ ၎င်းတို့ကိုသူတို့၏ပွင့်လင်းသောစိတ်၊ အခြားယဉ်ကျေးမှုများကိုလေးစားမှုနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအပေါ် their ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ တိုတိုပြောရရင်သြစတြေးလျတွေဟာနွေးထွေးပြီးရင်းနှီးဖော်ရွေသူတွေပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မိတ်ဆွေများကြားတွင်သြစတြေးလျလူမျိုးများသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်ခင်စွာနှုတ်ဆက်ခြင်း - ပါးပေါ်တွင်နမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပွေ့ဖက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ တက္ကသိုလ်အစည်းအဝေးဖြစ်စေဖြစ်စေသြစတြေးလျလူမျိုးများသည်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အပြုံးဖြင့်ယဉ်ကျေးစွာနှင့်တရားဝင်အားဖြင့်အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြသည်။
သြစတြေးလျဓလေ့ထုံးတမ်းအရနှင့်အခြားသောနိုင်ငံများနည်းတူအစည်းအဝေး၏အစနှင့်အဆုံးတွင်အစည်းအဝေးအတွင်းရောက်ရှိနေသော guests ည့်သည်များနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သင့်သည်။
ထို့အပြင်သြစတြေးလျလူမျိုးများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေး၌ပင်သူတို့၏အမည်များကို အသုံးပြု၍ အခြားသူများကိုမကြာခဏစကားပြောကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါသင်၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများ၏အမည်ကိုအလွတ်ကျက်ရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားသူကိုနှုတ်ဆက်သည့်အခါမျက်လုံးချင်းထိရန်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လေးစားမှုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကသူတစ်ပါးပြောတာကိုဂရုပြုနားထောင်နေကြောင်းလည်းပြသသည်။
G'day - ကောင်းမွန်သောနေ့၏အတိုကောက်ပုံစံသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှုတ်ခွန်းဆက်ရန်အသုံးအများဆုံးနှင့်အလွတ်သဘောပုံသေနည်းဖြစ်ပြီး“ gidday” ဟုအသံထွက်သည်။ ၎င်းကိုနေ့ရောညပါအသုံးပြုနိုင်သည်။
"Ow ya goin 'mate?": ဒါဟာလူသိများတဲ့ "ခင်ဗျားအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဘယ်လိုနေလဲ?" ဆိုလိုတာကမင်းဘယ်လိုနေလဲ
"Cya This Arvo" - seeစတြေးလျလူမျိုးတွေဟာစကားလုံးတွေကိုအတိုကောက်ရေးတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီပုံသေနည်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့သည်အခြေအနေအားလုံးတွင်နေ့လည်ကိုရည်ညွှန်းရန် arvo ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုသုံးကြသည်။
"Hooroo" - နောက်မှတွေ့မယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာ။
"မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်" ။ မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။
« Ta »: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးကိုတရားဝင်အခြေအနေတွင်တင်ပြရာတွင် "Señor", "Señora" နှင့် "Señorita" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို "Mr. ", "Mrs. " ဟုသုံးသည်။ နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများကို "Miss" ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုအကြားအလွတ်သဘောတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါက“ ဤသူသည်ငါ၏အဆွေပေတရု” (သူသည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းပေတရုဖြစ်သည်) သို့မဟုတ်“ ဤသူကားငါ၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်အန်း” (သူမကကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Ana) ဖြစ်သည်။
ငါအရင်စာပိုဒ်များတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖော်မြူလာတစ်ခုခုကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ကပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်အသားကင်ဆိုင်သို့ဖိတ်ကြားခံရပါကထိုအုပ်စုနှင့်သင်တို့၏ပျော်စရာအတွက်သောက်စရာတစ်ခုခု (ဥပမာဘီယာ၊ ဝိုင်သို့မဟုတ်အချိုရည်) ကိုယူဆောင်လာခြင်းသည်ထုံးစံဖြစ်သည်ကိုသတိရသင့်သည်။
ဒါ့အပြင်သြစတြေးလျမှာပါတီရဲ့အိမ်ရှင်ကိုသူတို့လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုယူဆောင်လာစေချင်တာကိုဆက်သွယ်ဖို့အမူအကျင့်ကောင်းတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အိမ်တွင်ညစာစားရန်ဖိတ်ကြားခံရပါကသင်ရောက်ရှိသည့်အခါပန်းစည်း၊ ချောကလက်တစ်ဘူးသို့မဟုတ်ဝိုင်တစ်ပုလင်းကဲ့သို့သောအိမ်ရှင်အားလက်ဆောင်တစ်ခုယူဆောင်လာသည်။
ဓနသဟာယနိုင်ငံသည်ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများရှိသည့်နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအများစုမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွိဘက်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာ "Bonjour" နှင့် "va va?" Maritimes မှာလူတွေကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုရိုးရိုးလေး (Hello) or Hi (သို့) နောက်မှဖော်ရွေတဲ့ "How ya 'doin"? အခြားတစ်ဖက်တွင်, အွန်နှင့်တိုရွန်တိုသည်လည်းအလားတူဖော်မြူလာများကိုအသုံးပြုသည်။
တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နှုတ်ဆက်ရန်အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည် ၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး အားအခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလောကတွင်အစည်းအဝေးမစခင်တွင်လက်တွေ့တွင်လေ့ကျင့်လေ့ရှိသည်။
"Hello or Hi" ဆိုလိုတာက "hello" ကိုဆိုလိုသည်။
"နေကောင်းလား": "ဘယ်လိုနေလဲ" ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အလွတ်သဘောအခြေအနေများတွင်လည်းသုံးသည်။ များသောအားဖြင့်“ ငါကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါ၊ ဆိုလိုတာက "ငါနေကောင်းပါတယ်။
"မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်" - ဒီစကားစုက "မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်" လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေစဉ်မှာမကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်“ မင်းနဲ့တွေ့ဖို့ကောင်းတာပဲ” (အများအားဖြင့်လည်းသင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်) နဲ့အဖြေရလေ့ရှိပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေစဉ်မှာလည်းမကြာခဏပြောလေ့ရှိပါတယ်။
«မင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်» - အခြားသူကိုတွေ့လိုလျှင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၀ မ်းမြောက်ကြောင်းဖော်ပြရန်မှာအခြားပုံသေနည်းဖြစ်သည်။ အဖြေရရန် "too" ကိုဝါကျ၏အဆုံးတွင်အရင်ဖြစ်ရပ်အတိုင်းထည့်သွင်းထားသည်။
အနာဂတ်အကြံဥာဏ်များကိုသမုဒ္ဒရာတိုင်းပြည်တွင် သုံး၍“ Aussie” ကဲ့သို့နှုတ်ဆက်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » သြစတြေးလျလူမျိုးများအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပုံကိုသိခြင်း
သူတို့အား carepenis တစ်လိင်တူချစ်သူများကဲ့သို့အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်နှင့် fart ကြက်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုစို့ခြင်းနှင့်ရယ်မောလိင်တူချစ်သူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မြည်းနှင့် tits ဖမ်းပြီး 3000 နာရီအဘို့မိမိတို့မြည်းကို masturbating နှင့် shitdddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ၏အဆုံးလက်ညှိုး